स्थानीय स्तरमा कर तिर्ने व्यवस्था नहुदा स्थानीयलाई सास्ती पचाँस रुपैयाँ तिर्न पाँचसय खर्च « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
नेकपा नगरसमिति बैठक : सामाजिक विकृति र अखाद्य वस्तु बिक्री विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय
स्थानीय स्तरमा कर तिर्ने व्यवस्था नहुदा स्थानीयलाई सास्ती पचाँस रुपैयाँ तिर्न पाँचसय खर्च
June 4, 2018 मा प्रकाशित
गिरिराज ने पाली
दाङ,२१ जेठ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकायलाई भंग गरी स् थानीय तह निर्माण गरिएको छ । नया संरचना निर्माणसगै स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएका छन् भने अधिकारअनुरुपका से वा पनि गाउ–गाउ पुगे का छन् ।
तर सबै अधिकार र से वा गाउ–गाउमा पुगे पनि राजस् व से वा गाउमा पुग्न सके को छै न । जसका कारण वडावासीहरु राजस् व दस् तुरभन्दा बढी रकम खर्च गरे र राजस् व बुझाउन आउनुपर्ने बाध्यता छ । टाढा–टाढाबाट कर बुझाउन आउदा गाडी भाडादे खि खानासम्मको खर्च बन्दो बस् त गरी आउनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणले खे पिरहनुपरे को छ ।
स् थानीयतहका वडा कार्यालयहरुमा राजस्व (सम्पत्ति कर) असुली से वा पुग्न नसक्दा समय र पै साको नो क्सानी बे हो र्नुपरिरहे को वडावासीको गुनासो छ । घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ हो डवाङका ओ वाराम रावतले राजस् व दस्तुर भन्दा दशगुणा बढी रकम राजस्व बुझाउन आदा खर्चलाग्ने गरे को बताउनुभयो  । उहाले भन्नुभयो – ‘५० रुपै या राजस्व बुझाउनका लागि पाच सय रुपै या खर्च गर्नुपनेर् बाध्यता छ ।’
जसले गर्दा दै निक कामकाज र पै साको नो क्सानी खे प्नुपरे को उहाको भनाइ छ । साविक गाविसमा बुझाइने करमा दस् तुरबाहे क अन्य खर्च के ही नलाग्ने बताउदै उहाले भन्नुभयो – ‘कर दस्तुर बुझाउन अन्य खर्चको जो हो गर्नुपर्ने बाध्यता परे को छ ।’ गाडी भाडँदे खि खाना/खाजा र उस्तै परे बासका लागि पै साको बन्दो बस्त गरी हिड्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाले बताउनुभयो  । दुईतर्फी गाडी भाडा तीन सय र खाना, खाजा तीन चार सय गरी कम्तिमा हजार रुपै या जति गो जीमा लिई कर तिर्न आउनुपर्ने बाध्यता रहे को उहाले बताउनुभयो  ।
‘गाविसमा कर बुझाउदा करबाहे क अन्य पै साको जो हो गर्नुपदैर् नथ्यो  । खाना, खाजा घरकै , फुर्सदमा आयो भने कामको हर्जा ह“ुदै नथ्यो  । अहिले कर तिर्नकै लागि अरु काम छो डे र खर्च बो के र आउनुपर्ने बाध्यता छ’– उहाले भन्नुभयो  । वडा कार्यालयहरुमा कर से वा पु¥याउन सके अनावश्यक खर्च र झञ्झट बाट सर्वसाधारण मुक्त हुने उहा“को भनाइ छ । जसका लागि स् थानीय तह तीब्रताका साथ लाग्नुपर्ने उहाको सुझाव छ ।
त्यस्तै घो राही उपमहानगरपालिका–१ का डाखुट्टीका के शव बुढाथो कीले चार कट्ठा जग्गाको सम्पत्ति कर २५ रुपै या“ तिर्नुभयो  । जसका लागि उहा“ले एक सय २० गाडी भाडा र खाना दुई सय रुपै या“ खर्च गर्नुभयो  । २५ रुपै या“ करका लागि तीन सय २० रुपै या खर्च हुदा अनावश्यक भार बढे को उहाले बताउनुभयो  । कर थो रै खर्च धे रै ले आफूलाई पीडित बनाएको उहाको गुनासो छ । जसले . गर्दा नागरिकलाई राज्यले अन्यायमा पारे को उहाले बताउनुभयो  । मजदुरी गरे र जीविको पार्जन गनेर् नागरिकहरुका लागि यो अति नै अन्यायपूर्ण रहे को उहाको भनाइ छ ।
स् थानीय तहका वडा कार्यालयहरुमा राजस् व से वा विस् तार हुन नसक्दा आम सर्वसाधारणले यही पीडा खे प्दै आइरहनुपरे को छ । प्रविधि र जनशक्तिको अभावका कारण तत्कालै वडा कार्यालयहरुबाट राजस् व असुली से वा दिन नसकिएको घो राही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौ धरीले बताउनुभयो  ।
वडा कार्यालय रहे का स्थानहरुमा इन्टरने ट से वा विस्तार नभएकाले यस् तो समस् या दे खिएको उहाले बताउनुभयो  । राजस् व असुलीका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवे यर र इन्टरने ट विस् तारको काम तीब्रताका साथ भइरहे काले आउदो साउनदे खि १८ वटै वडामा राजस् व से वा विस् तार गरिने उहाले जानकारी दिनुभयो  ।
वडा नं. १० मा गत १७ गते दे खि राजस् व से वा विस् तार भइसके काले त्रिपुर क्षे त्रमा यस् तो समस् या नभएको र अन्य वडाहरुमा दे खिएको समस्या पनि चाडै समाधान गरिने उहाले बताउनुभयो  । उहा“ले भन्नुभयो – ‘सवै से वा घर आ“गनमै पु¥याइरहे का छांै  । राजस् व से वालाई प्रविधि र जनशक्तिले प्रभावित पारे को छ ।’
दाङमा ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु
दाङमा अवैध सालको काठ ओसार पसारमा संलग्न चार जना प’क्राउ